China Bidet ရောနှောထိပုတ်ပါ၊ Bidet ရေရောနှော၊ bidet ထုတ်လုပ်သူအတွက်ရောနှောပါ
SHENZHEN KING OF SUN INDUSTRY CO.,LTD [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer , Trade Company အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , Other Markets , West Europe , North Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:81% - 90% Cert:ISO9001, CE, Test Report ဖေါ်ပြချက်:Bidet ရောနှောပုတ်,Bidet ရေရောနှော,bidet များအတွက်ရောနှော,ကြေးဝါ bidet faucet,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Bidet ရောနှောစက်
Bidet ရောနှောစက် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Bidet ရောနှောပုတ်, Bidet ရေရောနှော ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, bidet များအတွက်ရောနှော R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
ကုန်းပတ် Chrome ကြေးဝါရေချိုးခန်း Bidet Faucet
ရေချိုးခန်းကြေးဝါ Chrome Shower Bidet Faucet
အမျိုးသမီးသုံး Bidet ရေချိုးခြင်းအတွက်အိမ်သုံး Faucet
တစ်ခုတည်းလက်ကိုင် Chrome ကိုကြေးဝါ Bidet Faucet
ကုန်းပတ်တပ်ဆင်ထားတစ်ခုတည်းလက်ကိုင် Bidet Faucet
အရည်အသွေးမြင့်နှစ်ဆလက်ကိုင်ကြေးဝါ Bidet Faucet
နေရာလေးကို Bidet faucet ။ ၎င်းသည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမြင့်မားပြီး၊ သူတို့အားကြီးမားသော faucet ဘုံဘိုင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့ features တွေရှိပါတယ်။ အခြားဗန်းများကိုလည်းလည်ပတ်သည်။ ဒါဟာတကယ်အများကြီးရောင်းပါတယ်။ လွယ်ကူသော Bidet ရေရောနှောခြင်းသည်လူသိများပြီးသားဖြစ်ပြီး ၀ န်ဆောင်မှုကိုဂရုပြုပါသည်။...
Supply နိုင်ခြင်း: 2000pcs/month
min ။ အမိန့်: 200 Piece/Pieces
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနေသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး က၎င်းအိမ်များကိုဟိုတယ်များ၊ houses ည့်အိမ်များတွင် Bidet ရောနှောပါ ၀ င်သည်။ Bidet ရေရောနှောအသုံးပြုခြင်းသည်အဘယ်နည်း။ bidet အတွက်ရောနှောခြင်းသည်အရေးကြီးသည် မွတ်စလင်များအတွက်။ အရှေ့တောင်အာရှ၊ တောင်အာရှ၊ အနောက်အာရှနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများမှာရှားပါးသည်...
အဆိုပါ Bidet ရောနှောထိပုတ်၏ function ကိုအင်တုံပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားအင်တုံ mxier နှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်အမျိုးသမီးများအတွက်သီးသန့်အစိတ်အပိုင်းများကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ bidet အဘို့အရောနှောသည့် bidet အပေါ် installed ဖြစ်ပါတယ် Bidet ရေရောနှော ခြင်းကိုမိသားစုအများစုတွင်လက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်း...
bidet များအတွက်ရောနှောကဘာလဲ? လူတိုင်းအကျွမ်းတဝင်မရှိခြင်း၊ Bidet ရေရောနှောသုံးနည်း အမျိုးသမီးအဝတ်လျှော်မှုအတွက် Bidet ရေရောနှောခြင်းသည်အိမ်သာသုံးစက္ကူဖြင့်မသန့်ရှင်းနိုင်ပါ။ Brass bidet faucet ၏ရေပူနှင့်ရေအေးအပူချိန်သည်ဆေးကြောရန်နှင့်အသုံးဝင်သည် နှစ်သိမ့်မှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၊...
လူနေမှုအဆင့်အတန်း၊ ရေချိုးခန်းအရည်အသွေးတိုးတက်ခြင်းနှင့်အတူ ယခုပိုပိုပြီးအဆင်ပြေသည်။ ဥပမာနေရာများစွာရှိသည် bidet အတွက်ရောနှောတပ်ဆင်ပြီး Bidet ရေရောနှောခြင်းသည်အမျိုးသမီးများစွာအတွက်ရေပန်းစားသည်။ အဆိုပါ Bidet ရောနှောထိပုတ်ပါပူခြင်းနှင့်အအေးဖြစ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းရေးအတွက်ကြေးဝါ bidet faucet...
bidet ကိုဘယ်လိုရှင်းလင်းရမည်နည်း bid bidet တွင်ကြေးဝါ faucet တစ်ခုရှိသည်၊ သင်၏ ဦး တည်ချက်ကိုပြောင်းနိုင်သည် ကြေးဝါ bidet faucet ။ သငျသညျကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ, သင်ကအိမ်သာကဲ့သို့ "ထိုင်" ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင်တို့တဘက်၌ထ "စီး" နေကြတယ် ကံကြမ္မာ။ Bidet...
Bidet ရေရောနှောခြင်းကိုယ်ထည်သည်ကြေးဝါ၊ ကြွေထည်မြေထည်၊ spout သည် 360 ဒီဂရီလှည့်နိုင်သည်။ ကြေးဝါ bidet faucet ဖြစ်ပါတယ် အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီး bidet အတွက်ရောနှောခြင်းသည် အထူးသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းဖြစ်သည် အမျိုးသမီးများအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ bidet ၏ပုံသဏ္theာန်သည်အိမ်သာနှင့်ဆင်တူသည်။ ဒါပေမယ့်ဒါက faucet nozzle တပ်ဆင်ထားတဲ့...
တရုတ်နိုင်ငံ Bidet ရောနှောစက် ပေးသွင်း
ဒီနေရာတွင် Bidet ရောနှောစက် အတွက်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ငါတို့ Bidet ရောနှောပုတ်,Bidet ရေရောနှော,bidet များအတွက်ရောနှော,ကြေးဝါ bidet faucet,, ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပို့ကုန်ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီပို့ကုန်အရည်အချင်းပြည့်ထုတ်ကုန်သေချာစေရန် Bidet ရောနှောစက် ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်များတိုးတက်ပါပြီ။
သငျသညျ Bidet ရောနှောစက် အတွက်ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုလျှင်, parameters တွေကို, မော်ဒယ်များ, ပုံများ, စျေးနှုန်းများနှင့် Bidet ရောနှောပုတ်,Bidet ရေရောနှော,bidet များအတွက်ရောနှော,ကြေးဝါ bidet faucet,, အကြောင်းကိုအခြားသတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုဖို့ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို click ပါ။
သငျသညျအုပ်စုတစ်စုသို့မဟုတ်လူတစ်ဦးချင်းစီများမှာမည်သို့ပင်ကျနော်တို့ Bidet ရောနှောစက် အကြောင်းကိုတိကျမှုနှင့်ပြည့်စုံသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူသငျသညျပေးအတတျနိုငျဆုံးမည်!
ကြေးဝါ bidet faucet